Dowlada Soomaaliya oo cadeysay sababta loo hakiyay Baasaboorkii laga bixin jiray magaalada Garowe – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaDowlada Soomaaliya oo cadeysay sababta loo hakiyay Baasaboorkii laga bixin jiray magaalada Garowe
Dowlada Soomaaliya oo cadeysay sababta loo hakiyay Baasaboorkii laga bixin jiray magaalada Garowe
Hiiraan Xog, Mar 13, 2018:- Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda Soomaaliya ayaa beenisay iney joojisay Baasaboorka ay ka bixineysay Xafiiska magaalada Garowe ee xarunta Maamulka Puntland.
Madaxda Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda ayaa sheegay in Hay’adda oo markii hore deganeyd guri Kiro ah oo gaar leeyahay ay hadda xarun weyn ka dhisatay magaalada Garowe, halkaasi oo ay ka sii socon doonto howsha Shacabka ay u heyso Hay’adda.
Hay’adda ayaa mar kale ku wargalisay bulshada ku xiran adeegga xaruntaan in adeegga bixinta Baasaboorka dib uga bilaaban doonto.
Dhinaca kale Hay’adda ayaa waxa ay cadeysay in aysan matalin isla markaana wax mas’uuliyad ah u haynin dad shaley sheegtey magaca Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda Soomaaliya.
Ugu dambeyn, Agaasinka Guud ee Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda Soomaaliya ayaa uga mahad celiyay madaxda Dowlad Goboleedka Puntland, gaar ahaan maamulka gobolka Nugaal wadashaqeynta hagaagsan, islamarkaana ku saleysan sharciyada dalka.
AKHRISO:- Baarlamaanka Soomaaliya oo Amar deg deg ah siiyay Ra’iisul wasaare Kheyre
AKHRISO:- Wasaaradda Boostada oo ka jawaabtay hadal ka soo baxay Somaliland